Isi > Tour De France
njedebe ikpeazụ nke njem de France
Oge ikpeazụ nke njegharị de France - azịza na ajụjụ a na-ajụkarị
Ugboro ole ka e nwere na Tour de France 2020? 21
tour de France ọdịda
Tour de france ọdịda - nkọwa zuru ezu
Kedu onye si na Tour de France 2021 pụọ? Tony Martin
Zwift tour de france - usoro kachasị
Kedu ka Virtual Tour de France si arụ ọrụ? Nke a bụ otú njem nlegharị anya nke ọma, nke mebere l'Etape du Tour de France, na-arụ ọrụ Na L'Etape du Tour de France, otu ụzọ ahụ ka a na-ebugharị dị ka ndị ọkachamara. A ga-enwe ngụkọta nke atọ dị iche iche nke ga-eme na nke ọ bụla n'ime izu atọ na July
Chris froome tour de france 2016 - otu esi ekpebi
Afọ ole bụ froome Chris Froome / Afọ
2017 tour de france onye mmeri
2017 tour de france win - how to njikwa
Ego ole ndị mmeri nke Tour de France gbara? Kachasị ama ama, Lance Armstrong napụrụ aha ya asaa bụ aha eji egwu ọgwụ. Alberto Contador furu efu na 2010 na Floyd Landis na 2006. Ọtụtụ n'ime ndị mmeri ndị ọzọ, bidoro ngwụsị 1990, gụnyere Marco Pantani, Jan Ullrich na Bjarne Riis, abanyekwara na mkparị doping.
tour de france otu oge ikpe
Tour de france otu oge ikpe - mkpebi dị irè
Enwere ikpe oge na 2020 Tour de France? Ọnọdụ penultimate nke Tour de France ga-ewere n'ugwu ikpeazụ nke agbụrụ ahụ, La Planche des Belles Filles, ọ bụ ezie na na njedebe nke oge 36.2km ikpe karịa nke nnukwu ugwu.
tour de france stage 21 mbido oge
Tour de france stage 21 bidoro oge - ihe ngbadoro ime ihe
Kedu mgbe Tour de France na-amalite na 2021? June 26, 2021, 3:33 PM GMT-7
tour de france ndị na-ese anwụrụ
Tour de france na-ese anwụrụ - otu esi ekpebi
Ọ bụla pro ịgba ígwè na-ese anwụrụ? Kedu? Ndị na-agba ịnyịnya ígwè agaghị a smokeụ sịga! Ha na-ahụ ahụ ha dị ka ụlọ arụsị ma na-eri ihe ndị kachasị mma. 12. 2009.
njem njegharị France 2019 standings
Tour de France 2019 standings - ihe ngwọta ga-arụpụta
Nye na-eduzi 2020 Tour de France? Primo? Rogli?
tour de France agbago ọsọ
Tour de france downhill speed - kedu ka ị si ekpebi
Kedu ọsọ ọsọ ndị njem France de France na-agbada? Na Mpaghara njem nke France de France, ha nwere ike ịga ọsọ ọsọ dị ka 65 mph / 110 Km / h, ọbụnadị na-efunahụ ndị nta akụkọ ọgba tum tum.
uwe njegharị de France
Uwe njegharị na-acha odo odo na France - mkpebi ndị dị mkpa
Kedu ihe agba odo odo na Tour de France? maillot jaune
motorized igwe njegharị njem France
Motorized bike tour de france - ngwọta pragmatic
Ego ole ka njegharị Tour de France na-efu 2020? Ọ Ga-efu Gị Ihe $ 12,000. The Tour de France abụghị naanị nnukwu ịgba ọsọ ịgba ọsọ nke afọ bụkwa nnukwu ọkwa maka ndị nkwado na ndị nrụpụta iji kpughee igwe nrọ ha kacha ọhụrụ. 6. 2018.
igwe eletriki igwe eletrik
Eletriki igwe eletrik france - esi edozi
Iwu iwu ịnyịnya igwe eletrik na France? Ozugbo igwe eletriki eletrik karịrị iwu nke 25 km / h, a naghịzi ele ya anya dị ka igwe eletriki eletriki, kama dị ka igwe ọsọ na France. Nke ikpeazụ nke njedebe ọsọ ya dị na 45 km / h nọ n'okpuru iwu dị iche iche.
ọnụ ọgụgụ nke usoro na njem de France
Ọnụọgụ nkebi nke njegharị de france - Akwụkwọ ntuziaka zuru ezu
Ugboro ole ka mbipụta nke Tour de France nke 2020 nwere? 21
tour de France 2017 okuku
Tour de france 2017 okuku - ahụkarị azịza na ajụjụ
Ọ nwere ndị na-agba ịnyịnya nwụrụ na Tour de France? Afọ iri abụọ gara aga, Fabio Casartelli dara n'ime ihe mgbochi mgbe ọ na-agbadata na Cat. 1 Col de Portet-d'Aspet n'oge nke 15 nke 1995 Tour de France na July 18. N'ime otu ihe egwu kachasị na akụkọ ntolite njem, ndị Tourtali nwụrụ site na nnukwu mmerụ ahụ. Ọ bụ 24.
Tour de france onye mmeri 2012
Tour de france winner 2012 - ka esi ekpebi
Nye meriri na mbụ Tour de France? Tour de France 1903 / onye mmeri
michael matthews njegharị de France
Michael matthews tour de france - ihe ngwọta maka
Onye kpatara ọgba aghara Tour de France? Mana maka njem ahụ ọganiihu, sọpụrụ nchekwa nke ndị na-agba ịnyịnya ahụ! Ihe ọghọm nke akara ndị na-ekiri ihe nkiri kpatara bụ ụbọchị mbụ nke mmeghe. Onye ọgba tum tum German Jasha Suetterlin bụ onye mbụ na-agba ọsọ nke hapụrụ agba ọsọ ahụ mgbe okuku ahụ mechara na ihe ọghọm nke abụọ wedara ọtụtụ ndị ọzọ, Reuters na-akọ. 29. 2021.
chris froome njegharị France
Chris froome tour france - otu esi ejikwa
Ọ bụ Chris Froome na Tour de France 2021? Froome bịanyere aka na nkwekọrịta afọ ise tupu oge 2021 na agbanyeghị na ọ dị afọ 36, Adams ekwenyeghi na ha ga-alaghachi n'ahịa maka onye ọzọ na-asọmpi Grand Tour. 30. 2021.
isi njegharị de France
Isi ihe de Tour de France - otu esi edozi
Kedu otu Points si arụ ọrụ na Tour de France? A na-enye ndị na-agba ha akara ihe dịka ọnọdụ ha si gwụchaa ọkwa ọ bụla, ma nwee isi ihe ndị ọzọ maka sprints dị n'etiti oge ụfọdụ. Ndị mmeri na-enweta ọtụtụ isi, yana obere akara aka enyere ndị gafere nke abụọ, nke atọ, wdg.
tour de France ọdịiche stage
Tour de france gap stage - nyocha zuru ezu
Kedu ebe kachasị sie ike na Tour de France? Na mpụga udi otu du Portet